Shacbiga Reer Somaliland Gaar ahaan Hargaysa oo aad ula Qabsaday Cunista Kalluunka • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Shacbiga Reer Somaliland Gaar ahaan Hargaysa oo aad ula Qabsaday Cunista Kalluunka
Somaliland iyo Somalia ba waxay leeyihiin xeebo aad u dheer oo ay ka buuxaan khayraad aad u fara badan, waxaana ka mid ah kalluunka noocyadiisa kala duwan ee aadka loo jecel yahay.
“Kalluunku wuu ka jaban yahay, wuu ka fiican yahay hilibka kale xagga nafaqo ahaan iyo tayo ahaan, marka aad baan u isticmaalnaa” ayay tidhi Sahro.
“Dadkan Tahriibaya ee badaha isku guraya waxaan ku oran lahaa kalluunka dalkeena hala gurto oo hala iibiyo, shaqo abuur badan ayuu samaynayaa”.
Bulshada reer Hargeysa ayaa haatan aad ugu baraarugtay faa’ida uu leeyahay ka ganacsiga iyo isticmaalka kalluunku ayadoo xaafado badan ay si joogto ah u iibsadaan.
“Kalluunku wuxuu ka mid yahay wax soo saarka dalka, wax soo saarkuna saddex meelood ayuu shaqo abuur ka sameeyaa, mar waxaa laga soo saaraa badda oo badda waxaa ka soo saaraya waa dad shaqaale ah, qaybta labaadna waa marka la habaynayo kalluunka, qaybta saddexaadna waa marka la iibinayo” ayuu yidhi Axmed.
Si kastaba ha ahaatee qaar badan oo kamid ah bulshada Soomaalida ayaan wali ku baraarugin faa’iiidada uu leeyahay kheyraadka badda ku jira oo kalluunku uu ka mid yahay.